Izindawo ezishibhile emhlabeni zise-Asia | Izindaba Zokuhamba
UMaria Jose Roldan | | Bali, Bangkok, Hanoi, Indonesia, I-Malasia, I-Tailandia, Ukuhamba kwe-Asia, Vietnam
Uma ufuna ukuhambela izindawo ezishibhile nokuthi futhi uyabathanda ngakho konke abanakho, ngeke uphuthelwe yilokhu okuthunyelwe ngoba ngizokutshela ngezindawo ezithile zabavakashi ezingakuthakazelisa. Yini enye, Kubalulekile ukwazi lapho uzokwazi khona ukuba neholide elihle kepha ukuthi iphakethe lakho alibukeki linentukuthelo enkulu.
Phawula ku ibhulogi uTim Leffel , umbhali wencwadi ethi The World's Cheapest Destinations: 21 Countries Where Your Money Is Worth a Fortune. Ukuhamba nokuzilibazisa kusuka ekukhetheni kwezindawo ezingabizi kakhulu emhlabeni, phakathi kwazo okusobala ukuthi iningi lase-Asia.
1 Amadolobha ase-Asia
1.1 Chiang mai, eThailand
1.2 IKathmandu, eNepal
1.3 IHanoi, Vietnam
1.4 Bangkok, eThailand
3 Southeast Asia for backpackers
4 Okubiza kakhulu indiza
5 Lapho usendaweni oya kuyo
Chiang mai, eThailand
Itholakala cishe amakhilomitha angama-700 enyakatho yeBangkok futhi ingenye yamadolobha avakashelwa kakhulu eThailand. Kungumuzi owaziwa nangokuthi "iLa Rosa del Norte" futhi idolobha elihle kakhulu ngenxa yemvelo ekulo.
Sikhuluma ngenhlokodolobha yaseNepal futhi yingakho kuyindawo efiswa izivakashi eziningi. Leli dolobha icishe ifane nanoma yiliphi idolobha elineziyaluyalu zase-AsiaKepha yidolobha elincane impela, linezakhamuzi eziyizigidi nengxenye kuphela. Iphakeme ngamamitha ayi-1317 ngaphezu kogu lolwandle futhi uma uzoyivakashela kanye, uzofuna ukubuya. Imigwaqo yayo, amathempeli, abantu, izikwele nakho konke ekunikezayo kuzokwenza ukuthi ubuye. Ubungani beNapalese buzokwenza uzizwe usekhaya.
IHanoi yidolobha ozoyithanda engxenyeni ngayinye yalo futhi nayo ayibizi kakhulu, ngakho-ke kuzoba ukonga ukujabulela izinsuku ezimbalwa lapho (okungenani kuqhathaniswa nezinye izindawo zabavakashi). IHanoi iyinhloko-dolobha yaseVietnam futhi lisenyakatho yezwe. Idolobha elineminyaka engaphezu kwenkulungwane lomlando futhi linezinto eziningi ezikhangayo ongathola ukuthi ngeke ube nezinsuku zokukubona konke.
Uma uya eBangkok uzothanda ukujabulela ukwenza i-guiri engxenyeni ngayinye yalo. IBangkok iseningizimu-mpumalanga ye-Asia. E-Thailand leli dolobha laziwa ngokuthi yiKrung Thep ukubhekisa kubukhulu baso obukhulu. Kukhona abantu abayizigidi eziyi-8 kulo futhi kunabantu abathanda izinxushunxushu ezijwayelekile zaleli dolobha kanye nabanye abazibuyiselayo.
Imigwaqo yayo, amapaki ayo, i-gastronomy yayo, ukubhucungwa kwayo, amaphathi ayo noma izitolo zayo kuzokwenza ufune ukuhlala lapho unomphela.. Ngeke uphuthelwe yilutho futhi akulona idolobha elibiza kangako.
Kepha uma okuthandayo kuyiziqhingi futhi ufuna ukwazi izindawo ezithile ezinhle futhi ujabulele ukuzola nenhlalakahle okulethwa yisiqhingi esinolwandle, awukwazi ukuphuthelwa izindawo ezilandelayo:
Ko Samui, eThailand
IBorneo, iMalaysia ne-Indonesia
Southeast Asia for backpackers
INingizimu-mpumalanga ye-Asia empeleni iyipharadesi labakhwama. Amazwe angathuthuki kakhulu abiza ngendlela emangalisayo njengoba ukuthengwa nezidingo zimbalwa, okwenza amanani entengo enyuke. Lokhu kwenzeka ezindaweni eziningi eNingizimu Melika futhi ikakhulukazi e-Afrika. Kungalesi sizathu ukuthi uma ufuna ukuhlala unethezekile kuzodingeka ulungise iphakethe lakho, futhi uma ufuna ukonga imali ... bese into enhle kakhulu ukuthi ucabanga ukuthi ungahamba kanjani njenge-backpacker.
Ngakolunye uhlangothi, iningi lamazwe aseningizimu-mpumalanga ye-Asia asathuthuka lapho kunokunikezwa okubanzi kwabavakashi futhi okudingayo, okuhlangene nemali nezindleko zokwehluka kokuphila, kwehlisa amanani entengo. Umphumela uba ukuthi eThailand, eMalaysia, eVietnam noma e-Indonesia singahamba ngamanani angenangqondo (inqobo nje uma sibeka induduzo eceleni) noma sisebenzise amanani angenanhlonipho (uyazi, umqondo wokunethezeka wase-Asia). Ngalesi sizathu, kuzoncika kuwe nasemcabangweni wakho wokujabulela amaholide okwenza ukuthi unqume ukuthi hlobo luni lohambo ofuna ukulwenza..
Okubiza kakhulu indiza
Ukuphela kwento ebiza kakhulu e-Southeast Asia ukufika lapho, izindleko zendiza. Ukuyinciphisa unezinketho ezimbili:
Ungalinda ngomzuzu wokugcina, okusho ukuthi unezinsuku eziguquguqukayo zokuya nokubuya futhi ungabantu ababili. Uzibeka engcupheni yokuthi izinsuku zeholide zifike nokuthi uphelelwe yindiza ngoba konke sekubhukhiwe.
Noma ungalindela ukuthengwa kwethikithi ngangokunokwenzeka, ukuze uthole ukunikezwa okuhle kakhulu. Futhi lokho kusho ukuguquguquka okuncane nokuba nakho konke okuhlelwe ... futhi uma kuvela okuthile okungalindelekile, kungenzeka ukuthi uzolahlekelwa yimali noma ingxenye enkulu yayo, ngoba lapho ubhukha kusengaphambili kakhulu ngokuvamile azikho iziqinisekiso eziningi buyisela ngaphandle kokuthi ukhansele umshwalense.
Lapho usendaweni oya kuyo
Uma ususemhlabathini, ukuthuthwa komhlaba akuhlali kahle kepha kushibhile ngendlela emangalisayo. Futhi izindiza zendawo zinikela ngamanani aphansi kakhulu.
Ngokuqondene nendawo yokuhlala, ngaphandle kwesizini ephezulu noma imicimbi ethile, kuvame ukuba ngcono ukuqasha njengoba ufika, ubuze bese uqhathanisa amanani. Yize abanye abathengisi abaku-inthanethi banganikela ngeminikelo yokuncintisana kakhulu.
Ukudla akubizi nje kuphela, kuhle ngendlela eyisimanga futhi kwehlukene, futhi kushibhe kakhulu.. Vele, uma uzivumelanisa nokudla kwasendaweni. Uma udla emahhotela aphambili, kuzokubiza ngokufana nalokhu noma ngaphezulu.
Ngalezi zimo kuvame ukuba kuhle ukuhlela uhambo olude (kusuka emasontweni ama-3 kuya phambili) ukuze ukwazi ukuhamba ngaphandle kokuxhamazela okungenza ukuhamba kubize kakhulu futhi kunciphise utshalomali kwithikithi. Kujwayelekile kakhulu ukuhlangana namaqembu abafundi abathathe unyaka wesabatha futhi Bebevakashele i-Asia izinyanga ngesabelomali esincane. Ngakho-ke uma ufuna ukuvakashela noma yiziphi izindawo okukhulunywe ngazo, into engcono kakhulu ongayenza ukuhlela kusengaphambili, futhi ujabulele konke indawo okhetha ukunikela ngayo!
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » Bali » Izindawo ezishibhile emhlabeni zise-Asia
ILuzon, isiqhingi esikhulu kunazo zonke ePhilippines